Mandeha ny resaka taorian’ny ambara fa fanadihadiana vita fa tsy nisy akory ny fanafihana na fakàna an-keriny ireo mpiasa. Hatreto, dia heverina ho tsaho ninian'ireo mpiasa naely ny hoe fisiana jiolahy sy ny filazana avy eo, fa nisaoty tany ambadiky ny garazy, fa tetika efa voahomana mba hangalarana ilay vola 5 tapitrisa ariary. Taorian'ny fanadihadiana lalina sy famerenana ny tranga nisy teny an-toerana (reconstitution des faits) niampy fihainoana ireo vavolombelona dia voaporofo fa tsy nisy jiolahy nanafika akory teny, hoy ny loharanom-baovao. Nisy tamin'ireo mpiasa no voalaza fa efa nihaiky ny heloka nataony. Raha izay tokoa no tena izy, dia efa tena maty paika ity tetikady ity. Voafitaka ny rehetra, ary nahazo tsiny sy voahompa mihitsy aza ny mpitandro ny filaminana hoe: jiolahy efa voadidina tsy tokony afaka handositra intsony ve dia tafaporitsaka? Sarotra anefa ity raharaha ity, ka ny tohin’ny fanadihadiana no heverina fa mbola hampipoitra ny zavatra tena marina niseho, fa hatreto aloha, dia sinema ny filazana fa misy jiolahy nanafika saingy tafatsoaka. Tsy tokony hihaino feon-dakolosy tokana anefa satria tena nisy ny fanafihana mitovitovy amin’ilay heverina niseho teny Itaosy, raha tsy hilaza afatsy ny teny Ambohidahy Ankandindramamy sy Ambositra.